Samia mitandrina fandrao ny fihetsehampontsika izay mifanohitra amin’ny sitrapon’ Andriamanitra no manakona ny lalana hizorantsika.
28 Novambra 2018
27 novembre 2018 by Njaka Ramanandafy
SAMOELA VOALOHANY 16 : 1-13
16:1 Ary hoy Jehovah tamin’i Samoela: Mandra-pahoviana no hahalahelovanao an’i Saoly, nefa Izaho efa nanda azy tsy ho mpanjakan’i Israely? Fenoy diloilo ny tandrokao, ka mandehana, fa hirahiko ho any amin’i Jese Betlehemita ianao; fa efa nahita mpanjaka ho Ahy ao amin’ny zanany Aho.
16:2 Fa hoy i Samoela: Hataoko ahoana no fandeha; fa raha ren’i Saoly izany, moa tsy hovonoiny va aho? Ary hoy i Jehovah: Mitondra ombivavy kely ianao, ka lazao hoe: Avy hamono zavatra hatao fanatitra ho an’i Jehovah aho.
16:3 Ary antsoy i Jese mba ho any amin’ny fanatitra, ary Izaho no hampahafantatra anao izay hataonao; ka dia hohosoranao ho Ahy izay holazaiko aminao.
16:4 Ary i Samoela nanao izay nolazain’i Jehovah, dia tonga tao Betlehema. Ary nitsena azy amin-kovitra ny loholona teo an-tanana ka nanao hoe: Fihavanana va no iavianao?
16:5 Ary hoy izy: Fihavanana; avy hamono zavatra hatao fanatitra ho an’i Jehovah aho; hamasino ny tenanareo, ary andeha hiaraka amiko ho any amin’ny fanatitra. Dia nohamasininy i Jese sy ny zanany ka nasainy ho any amin’ny fanatitra.
16:6 Ary nony tonga ireo, dia nijery an’i Eliaba izy ka nanao hoe: Ny voahosotr’i Jehovah tokoa ity eto anatrehany.
16:7 Fa hoy i Jehovah tamin’i Samoela: Aza mijery ny tarehiny na ny haavon’ny tsanganany, fa efa nolaviko izy; fa tsy mba toy ny fijerin’ny olona no fijerin’i Jehovah; fa ny olona mijery ny miseho eo ivelany, fa i Jehovah kosa mijery ny fo.
16:8 Ary i Jese niantso an’i Abinadaba ka nampandalo azy teo anatrehan’i Samoela. Fa hoy izy: Tsy ity no nofidin’i Jehovah.
16:9 Ary i Jese dia nampandalo an’i Sama indray. Fa hoy izy: Tsy ity no nofidin’ i Jehovah.
16:10 Ary i Jese nampandalo fito lahy tamin’ny zanany teo anatrehan’i Samoela. Fa hoy i Samoela tamin’i Jese: Tsy nofidin’i Jehovah ireto.
16:11 Ary hoy i Samoela tamin’i Jese: Tapitra eto avokoa va ny zanakao lahy rehetra? Dia hoy izy: Ny faralahy no sisa, fa miandry ondry izy. Ary hoy i Samoela tamin’i Jese: Maniraha haka azy, fa tsy hipetraka hihinana isika ambara-pahatongany eto.
16:12 Dia naniraka izy ka nitondra azy hiditra. Ary mena volo izy sady bary maso no tsara tarehy. Ary hoy i Jehovah: Mitsangana, hosory izy, fa io no izy.
16:13 Ary i Samoela nandray ny tandroka feno diloilo ka nanosotra azy teo amin’ny rahalahiny; ary ny Fanahin’i Jehovah dia nilatsaka tamin’i Davida hatramin’iny andro iny. Dia nitsangana i Samoela ka nankany Rama.
Hitantsika eto ny tohin’ny tantara :
1-Tsy avelan’ny Tompo hohajambain’ny alahelony an’i Saoly i Samoela.
Mandrapaoviana no hahalahelovanao an’i Saoly (and1),hoy izy . Koa samia mitandrina fandrao ny fihetsehampontsika izay mifanohitra amin’ny sitrapon’ Andriamanitra no manakona ny masontsika tsy hahita ny làlana tian’ny Tompo hizorantsika .
2-Maniraka azy hanosotra mpanjaka vaovao ny Tompo .
Mbola eo i Saoly , mbola tena eo amin’ny fitondrana izy , saingy tsy manakana ny Tompo , izay tompon’ny tantara , hifidy sahady sy hanosotra sahady ny mpanjaka vaovao izany . Niahotra i Samoela ,kanefa nanolo-tsaina azy ny Tompo, ka dia lasa izy .Isika koa ,Mety heverintsika fa mahatahotra ny làlana , saingy raha mihaino ny tolo-tsain’ny Tompo ao aminn’y teniny isika dia hahery ka handeha.
3-Mpanjaka tsy nampoizina no nofidin’ny Tompo .
Nalefa avokoa ireo zoky sy lehibe tamin’i Jese, saingy nolavin’ny Tompo avokoa . Ilaikely tavela tany an-tsaha no nantsoina fa iny no izy. Antony :tsy mba toy ny fijerin’ny olona no fijerin’i Jehovah , fa ny olona mijery ny miseho eo ivelany , fa i Jehovah kosa kosa mijery ny fo »(and7). Inona re no hitan’ny Tompo ao amin’ny foko sy fonao e?Marina amin’ny fitiavana Azy ve?